बुद्ध जयन्तीको दिन देशभर नै बलि रोके बौद्ध धर्मको सम्मान हुन्थ्यो की ?
Kumar Shrestha calendar_today २९ बैशाख २०७७, 10:30 am
कोरोना कहरका कारणले नेपाल बन्दाबन्दीमा छ । सबै नागरिकहरु गाउँमा छन् । हामी सबै जना सरकारले गरेको बन्दाबन्दीको पालना गर्दै घरमै बसेका छौँ। हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको पर्व चण्डी पुर्णिामा अर्थात बैशाखे पुर्णिामा थियो भने सोहि दिन आर्दश र त्यागी पुरुष सिद्वार्थ गौतम जन्मोजयन्ती थियो। भगवान गौतमबुद्धले हत्या हिंसा गर्नु अपराध हो भनी आफ्नो जीवन बिश्व शान्तिको कामना गर्दै तपस्या गरेर विताउनु भयो। जसको नामले बिश्व सामु हाम्रो राष्ट्र परिचित छ।
म हिन्दु धर्म मान्छु तर बौद्ध धर्मको पनि सम्मान गर्छु। म बुद्ध जन्मेको ठाउ लुम्बिनी पनि पुगेको छु। जीवनको आरोह अवरोहमा सफलताको गन्तब्य सम्म पुग्न सफल नहुँदा गौतम बुद्धको सिद्धान्त सम्झन्छु। एकपटक सफल भईएन भन्दैमा हार मान्नु हुँदैन ? अझ मानब जातीले कहिल्यै झगडा गर्नुहुन्न, भन्ने भनाइ पनि भगवान गौतम बुद्धकै हो। त्यस्ता आदर्श पुरुष जन्मेको हाम्रो राष्ट्रमा धेरै देबिदेवताका मुर्ती तथा शिलाहरूमा बलि चडाइन्छ। उहाँकै जन्म जयन्तीको दिन धेरै पुजा हुने गर्छ।
बुद्ध जन्मोत्सव को दिन हत्या गरेर हेर हेर भनेर कसलाई देखाएको हुन सक्छ हामिले सके देखी बलि त्यगौं, सक्दैनौं बर्षको एकदिन बुद्ध जयन्तीको दिन देशभर नै बलि रोक्न सक्यो भने भगवान गौतम बुद्धको सम्मान सबै धर्मले गरेको संकेत हुन्थ्यो की ?
केहि दिन अगाडीको एउटा घटनाले मेरो मानस्पटललाई चिमोटी रहन्छ । बिहान म उठ्नु भन्दा पहिला नै बाख्रा कराएको आवज आयो । सधैं बिहान चरा मात्र कराउथे त्यो दिन त बिहानै बाख्रा करायो। बेलुका बाख्रा चराएर हुल्ने मै हु। कतै हुल्न भुलेर बाख्राले मकै त खाएन?रातभर बाख्रा बाहिरै त बसेन ? म डाराए। निन्द्रा पनि भागे छ। जुरुक्क उठेर बाहिर पुगेको मात्र थिए, पुजा लाने भनेर पाठी निकालेको रहेछ।सगै रातो लामा नङ्ग्रा भएको भाले, परेवा अनि कुखुराको अण्डा सहित बाँसको लौरो मा सेतो रातो कपडा बाधेर ठिक पारेर राखेको रहेछ। म उठेपछि मन्दिर मा जान तयार हुनु भन्नु भयो ममिले । त्यो पनि नुवाइधुवाइ गरेर रे। बिहानै नुहाउन मलाई ज्यादै अल्छी लाग्ने। त्यहाँ माथी बुद्ध जयन्तीको दिन किन किन मलाई पुजा गर्न जान मनै मानेन। अघि पछित बलिको बिरोधी झन बुद्ध जयन्तीको दिन त मेरो मनले कसरी मान्छ र?? मेरो मात्र होइन बुद्धको सिद्धान्त पढ्ने कोहिको नि मन मान्दैन। ममिको कुरा अटेर गर्दै बिहानै बाख्रा खोले। गाउघर तिर सबैलाई बोलाउदै बाख्रा बाटो लगाए।
बरन्डाको खाबोमा बाधेको पाठी पनि जान बल गर्यो। तर बाधेको पशु कसरी जाओस् । त्यसको आवज सगै मेरो आखा बाट आशु झर्यो सम्झे बनमा जहाँ लगायो त्यही चर्ने आइजला ला भन्ने बितिकै आउने किन होला त्यही पाठी पुजा गर्नु परेको?
बरन्डाको खाबोमा बाधेको पाठी पनि जान बल गर्यो। तर बाधेको पशु कसरी जाओस् । त्यसको आवज सगै मेरो आखा बाट आशु झर्यो सम्झे बनमा जहाँ लगायो त्यही चर्ने आइजला ला भन्ने बितिकै आउने किन होला त्यही पाठी पुजा गर्नु परेको? मनमनै सोचे सोझो पशुलाइ नि हेप्ने रहेछन। मान्छेलाई मात्र होइन भनेर चित्त बुझाए। बाख्रा बन मा लैजदा अलि माथी मन्दिरमा धामी हेर हेर भनेर काम्छ। मनमनै । बुद्ध जन्मोत्सव को दिन हत्या गरेर हेर हेर भनेर कसलाई देखाएको हुन सक्छ हामिले सके देखी बलि त्यगौं, सक्दैनौं बर्षको एकदिन बुद्ध जयन्तीको दिन देशभर नै बलि रोक्न सक्यो भने भगवान गौतम बुद्धको सम्मान सबै धर्मले गरेको संकेत हुन्थ्यो की ?